﻿	Crockpot ကြက်သား Tacos - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ရေထဲမှာ taquitos ချက်ပြုတ်နည်း
ကြက်သား fajita အသားကိုသုံးပြီးချက်ပြုတ်နည်းများ
ပူစီနံနှင့်အတူအကောင်းဆုံး moscow လားစာရွက်
Crockpot ကြက်သား Tacos
CrockPot ကြက်သား Tacos လွယ်ကူသောမိသားစုအကြိုက်ဆုံးမုန့်ညက်ဖြစ်ကြသည်! မီးဖိုချောင်ထဲနှေးသွားသောလက်တစ်ဆုပ်စာပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများသည် Tacos (သို့မဟုတ်အတွက်) အတွက်နူးညံ့သောအရသာရှိသည့်ကြက်သားကိုဖြစ်စေသည် ကြက် enchiladas , Burritos, တင် nachos နှင့်ပိုပြီး)!
ကြက်သားရင်သားများ၊ ဆဲလ်ဆာ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများနှင့်ရာသီဥတုများကိုထည့်ပါ။ ချက်ပြုတ်သူကအလုပ်ကိုလုံးလုံးလုပ်ပါ။ အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီကြက်သားဖျက်စီးနှင့်ပျော်မွေ့! ဒါလွယ်ကူပါတယ်!
Crockpot ဖျက်စီးကြက်သား Tacos
Taco ညရုံပိုမိုလွယ်ကူတယ်! ဤ Crockpot ကြက်သား Tacos အတူတကွထားအမြဲအံ့သြစရာထွက်လာရန်ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်တစ်ပြက်များမှာ! နူးညံ့သောကြိတ်ခွဲထားသောကြက်များသည် Tacos၊ Burritos၊
အံ့သြဖွယ်ဖြစ်စေရန်မြေသားအမဲသားကိုလဲလှယ်ပါ taco သုပ် ဒါမှမဟုတ်ဒီအရသာရှိတဲ့ဖျက်စီးထားတဲ့ကြက်သားကိုထုပ်၊
ဖျက်စီးကြက်သား Tacos လုပ်နည်း
ငါပြောချင်တာကဒီဟာငါ့မိသားစုတစ်စုလုံးအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အဲဒီချက်ပြုတ်နည်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို crock အိုးထဲတွင်နေရာချပြီးထွက်သွားပါ။
တာကိုအတွက်ကြက်သားရာသီငါအသုံးပြုသည် ... သင်ကခန့်မှန်း, taco ရာသီ! ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် အိမ်လုပ် taco ရာသီ ဒီစာရွက်ထဲမှာဆားကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဒါပေမယ့်အစုံလိုက်သုံးပက်ကက်တစ်ခုကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အချည်းနှီးဖြစ်သောကြက်သားရင်သားများကိုတောင်းဆိုသော်လည်းအရိုးကိုကြက်များတွင်လည်းသုံးနိုင်သည်။ ပြီးတာနဲ့ဖျက်စီး, ဒီperfectlyုံစူပါအစာရှောင်ခြင်းညဥ့်ညစာအောင်အောင်အေးခဲ!
ကြက်သားသုပ်များနှင့်စပ်သောကြက်သားပီဇာများပြုလုပ်ရာတွင်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရသာရှိသည့်အလွန့်အလွန်ညစာစားရန်အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံး toppings ကိုပုံပါ။
Chicken Tacos နှင့်အတူအဘယ်သို့စားရမည်?
ဤ crockpot ကြက်သား Taco insanely လွယ်ကူပါတယ်! သူတို့ကိုပြောင်းဖူး၊ ဂျုံမှုန့်၊ မက္ကဆီကန်ဆန် ဒါမှမဟုတ် cilantro ထုံးဆန် ။ လူတိုင်းမိမိတို့ဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်သောအဘို့အခင်းနှင့်ပြည့်စုံသောစားပွဲကြီးတစ်လုံးကိုကျွန်မတို့ထုတ်ကြိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး toppings နေသောခေါင်းစဉ်:
pico က de gallo
ပိုအနှစ်သက်ဆုံး Taco ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပုစွန် Tacos - အပတ်စဉ်အကြိုက်ဆုံး!
Taco ဟင်းချို - ဒါကြောင့်လွယ်ကူပြီးဤမျှလောက်အရသာ!
အမဲသား Taco ခေါက်ဆွဲကျွမ်းကျင်မှု - လွယ်ကူသက်သာသောအစားအစာ
5 မိနစ် Taco Dip - ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ဆုံးမိနစ်ပါတီကျဆုံးခြင်း!
အမဲသား Taco Casserole - မိသားစုအကြိုက်ဆုံး (ဤစာရွက်ကိုကလေးများနှစ်သက်ကြသည်)
လွယ်ကူသောငါး Tacos - Reader အကြိုက်ဆုံး (မြန်။ လွယ်ကူသည်)
Crock Pot ကြက်သား Tacos
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၄ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၄ နာရီ ၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly NilssonTaco ညရုံပိုမိုလွယ်ကူတယ်! ဤ Crockpot ကြက်သား Tacos အတူတကွထားအမြဲအံ့သြစရာထွက်လာရန်ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်တစ်ပြက်များမှာ! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၄ အသားမရှိသောအသားမရှိသောကြက်သားရင်သားတ ၀ က်
▢၁ ခွက် ငံပြာရည်
▢၁ ခွက် ချီလီနှင့်အတူစည်သွတ်အန်စာတုံးခရမ်းချဉ်သီး ညှစ်သို့မဟုတ် 1 လုပ်နိုင်တဲ့ Rotel
▢၁ အထုပ် taco ရာသီ ဒါမှမဟုတ် အိမ်လုပ် taco ရာသီ
▢½ ကြက်သွန်နီ အရက်
နိမ့်ကျသော 7-8 နာရီသို့မဟုတ်မြင့်မားသော 3-4 နာရီပေါ်ချက်ပြုတ်။
ကြက်သားကိုနှေးကွေးသောချက်ပြုတ်စက်မှဖယ်ရှားပြီးဖျက်စီးပါ။ နှေးကွေးသော cooker သို့ပြန်သွားနှင့်အရည်အတွက်နှိုးဆော်။
သငျသညျပိုနှစ်သက်လျှင်သင်စည်သွတ်ခရမ်းချဉ်သီးကိုကျော်သွားနိုင်ပြီး 1 ½ခွက် Salsa ထည့်နိုင်သည်။ အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များတွင် taco shell သို့မဟုတ် toppings မပါဝင်ပါ။
သော့ချက်စာလုံးcrockpot ကြက်သား Taco, နှေးကွေး cooker ကြက်သား tacos သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်မက္ကဆီကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
လွယ်ကူသောစတော်ဘယ်ရီ Shortcake စာရွက်
နွေရာသီပျော်စရာ! အိမ်လုပ်ရေခဲမုန့် (ရေခဲမုန့်ထုတ်လုပ်သူမလိုအပ်)
လွယ်ကူသော Snickerdoodle စာရွက်
၂၀ မိနစ် Broccoli ဒိန်ခဲ
Crock Pot ကြက်သား Enchiladas စာရွက်
Eggnog Latte ထိုး